Ndiqinisekisile uyilo lokugqibela lwe-OnePlus 6T kwimifanekiso esemthethweni
Kwiiveki ezimbalwa ezizayo enye yeefowuni ekulindelwe kakhulu koku kuwa iya kuboniswa. Sithetha nge-OnePlus 6T. Isiphelo esitsha esitsha somenzi waseTshayina sishiya iindaba ezininzi kwiiveki ezidlulileyo. Kwaye ngoku, imifanekiso yabo esemthethweni ityhiliwe. Enkosi kubo, uyilo lokugqibela lwefowuni sele luqinisekisiwe. Uninzi lwamahemuhemu luyaqinisekiswa.
Kwezi veki zidlulileyo Kudala sifumana idatha eninzi malunga nale OnePlus 6T, zombini malunga noyilo kunye neenkcukacha zayo. Ngoku, kolu hluzo lutsha sinoyilo lokugqibela lwesiphelo esitsha. Yintoni esinokuyilindela?
Njengoko yayityhilwe kwithuba elidlulileyo, ifowuni iya kuba nenotshi kwiscreen sayo. Nangona kule meko kunjalo inotshi yokunciphisa ubungakanani, emile okwethontsi lamanzi. Kububulumko ngakumbi kuneenotshi eziqhelekileyo esizibonayo. Ngokuqinisekileyo abaninzi bakholelwa ngakumbi ngolu luyilo.
Ngaphandle koko, Siyabona ukuba i-OnePlus 6T iya kuba nekhamera ngasemva ezimbini. Kule meko ibekwe nkqo, kwaye ecaleni kwayo sifumana iFlash Flash. Enye into enokuthi iqatshelwe kukuba akukho sensor yeminwe ngasemva kwefowuni.
Ayikho kwicala nokuba, kodwa ijongeka ngathi yile OnePlus 6T izakusebenzisa isivamvo seminwe esidityaniswe kwiscreen. Yinto esiyibonayo ngokwanda kwamaxesha kwintengiso, kwaye nakwesi siphelo siphezulu saseTshayina.
Ngokubhekisele kubukho bemibala, akukho nto ingako ithethwayo okwangoku. Kule mifanekiso sinokubona ukuba kukho izithunzi ezimbini ezimnyama zale OnePlus 6T, omnye umnyama, ugqityiwe nge-matte kunye nomnye onetoni phakathi komnyama nengwevu. Nangona ngethemba lokuba kuya kubakho omnye umbala okhoyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » Ndiqinisekisile uyilo lokugqibela lwe-OnePlus 6T kwimifanekiso esemthethweni
Ukuvuza kweSony Xperia L3 kutyhila inzwa yeminwe esecaleni kunye nekhamera ezimbini
ISuperSU isusiwe kwiVenkile yokudlala